Heerarka Dhibcaha Pivot ee Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Heerarka Dhibcaha Pivot - ganacsi lala yeesho kuwa sameeya suuqa
Furitaanka heshiis bilowga isbeddel cusub, qaadashada faa'iidada ugu badan ee dhaqdhaqaaqa sicirka waa riyada dhammaan ganacsatada. Sidee loo go'aamiyaa haddii dib u noqoshada ay run tahay? Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay kaliya dib-u-celin muddo gaaban ama saxitaan ah, taas oo ka wanaagsan in laga fogaado suuqa. Fikrad kasta waa had iyo jeer mid shakhsiyan ah, laakiin waxaa jira habab sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee sida ugu sarreeya uga takhalusi kara bini-aadamka, sida heerarka Pivot Point.
Habka waxaa loo adeegsaday tan iyo 30-meeyadii qarnigii la soo dhaafay, waana mid si isku mid ah faa'iido ugu leh hanti kasta oo ganacsi, iyadoon loo eegin xaaladda suuqa ee hadda jira. Dhamaan ganacsatadu waxay arkayaan isla dhismooyinka, taas oo sii xoojinaysa saameynta ganacsatada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah - haddii istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay muujiso sii socoshada isbeddelka ka dib marka heerka la jebiyo, tani waxay u badan tahay inay dhacdo, xitaa haddii aysan jirin sabab iyo weynaan jagooyinka mar hore ayaa la xiray.
Maxay heerarka dhibcaha Pivot muujinayaan?
Marka hore, kuwani waa heerarka taageerada / iska caabinta, halkaasoo ay ka jirto isku dheelitirnaan ku meel gaar ah oo u dhexeysa xoogagga iibsadayaasha iyo kuwa wax iibinaya. Halkan waxaad ka heli kartaa tiro aad u tiro badan oo ah Joojinta Joojinta iyo amarada sugaya ee kuwa sameeya suuqa si ay u furaan boosas ka soo horjeedka isbeddelka weyn. Si kale haddii loo dhigo, waxaa kordhay xiisaha suuqa, fiiro gaar ah u leh dhaqdhaqaaq kasta oo sicir ah ama astaamaha binary auto.
Dhammaan wax ka beddelka Dhibcaha Pivot waa ujeeddo sida ugu macquulsan, waxay isticmaalaan oo keliya "saafi" xogta qiimaha la soo dhaafay (bil, toddobaad, maalin) iyada oo aan celcelis ahaan, sixid iyo dardar-lahayn - kaliya tirada muddooyinka ayaa la isku hagaajiyaa. Xitaa haddii ay jiraan kala duwanaansho yar oo xigashooyinka u dhexeeya dallaaliinta, natiijooyinka waa inaysan si weyn u beddelin. Tan waxaa loo isticmaali karaa in lagu hubiyo xigashooyinka dallaalka ama calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah: heerarka dib u noqoshada labalaab laguma tiriyo; xogtaadu waa inaysan ka duwanaan xogta dadweynaha wax ka badan +/- 3-5 dhibcood.
Nooca caadiga ah, heerka dhexe (furaha) ayaa marka hore lagu tixgeliyaa qiimaha OHLC (Furan / Xir / Sare / Hoose). Marka xigta, jaantusku wuxuu qorsheynayaa seddex heer oo iska caabin ah oo ka saraysa iyo seddex heer oo ka hooseeya heerka dhexe:
Qiimaha Pivot ee lammaanaha lacagta ayaa isbeddelaya maalin kasta, ganacsatada badankood waxay isticmaalaan xiritaanka kal-fadhiga ganacsiga ee New York 04: 00 EST oo ah waqtigooda "maalinta cusub". Sharciga aasaasiga ahi wuu shaqeeyaa: waqtiga ugu weyn, heerarka muhiimka ah (xoog leh) ayaa noqon doona.
Uma baahnid inaad ku xisaabtantaa gacanta - u isticmaal xogta labada lamaane ee waaweyn iyo waqtiga ku jira bogagga maaliyadeed. Tusaale:
Maaddaama tirakoobka ganacsigu soo ururay, kiiska salka ayaa la beddelay. Hababka xisaabinta ee soo socda ayaa hadda caan ah:
Fibonacci . Tixda taxanaha ah ee caanka ah ayaa la isticmaalay, laakiin waxaa macquul ah marka lagu daro qiyamka aasaasiga ah, waxaad u baahan doontaa qiimayaal dheeri ah oo ku saabsan astaamaha hantida iyo isbeddelka hadda jira. Waxaa laga heli karaa dhammaan xarumaha ganacsiga, oo si faahfaahsan loogu sharraxay suugaanta falanqaynta farsamada, si ka duwan "qadiimiga" Pivot Point waxaa loo isticmaali karaa qalab madax-bannaan oo ku habboon istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah;
Woodie . Istaraatiijiyaddan adag, qiimaha cusubi waa mid muhiimad weyn leh (culeys). Markaad ka dhaqaaqdo "culayska" hadda jira, qiimayaashu way yaraanayaan. Waxaan helnay qiimeyn sax ah oo ku saabsan xaaladda hadda jirta. Waxay si fiican ula shaqeysaa iskucelceliska dhaqdhaqaaqa (EMA) celceliska socodka, kuna shaqeynaya hab la mid ah;
Camarilla . Qoraaga ganacsadaha saamiyada Nick Scott wuxuu inta badan lashaqeyn jiray curaarta iyo saamiyada. Dhaqanku wuxuu muujiyey in Forex kacsan, sideeda heer ee Camarilla ay sidoo kale si fiican u muujinayaan dhibcaha xulashooyinka furitaanka iyo xisaabinta dhicitaanka calaamadaha binary.
Farsamada Camarilla waxay sifiican ugu shaqeysaa xitaa tuurista mala awaalka ah, laakiin inta lagu jiro xilliyada wararka aasaasiga ah ee xoogan, way guuldareysaneysaa haddii dhacdada aysan horseedin sameynta isbeddel cusub oo xasilloon. Jaantuska, waxay umuuqataa shumac maalinle ah oo leh "hoosyo" waaweyn iyo "jidh" yar, sidaa darteed xitaa heerarka ugu horreeya aad ayey uga fogaan karaan qiimaha.
Duufaan Isku day ah in la sii saadaaliyo sicirka heerarkee ayaa isbadali kara tiro cayiman ka dib (waxaa jira wax isdabamarin ku saabsan daaqadaha la xiriira qiimaha hadda jira). Natiijooyinka xisaabinta waxaa lagu soo bandhigi karaa sida heerarka shaxanka ama oscillator-ka badan-dhaafka / daadka ee daaqad gooni ah.
Ganacsade ayaa laga yaabaa inuu seego calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee wanaagsan inta uu sugayo jabitaan! Waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso calaamadeynta adoo adeegsanaya Fibonacci ama Pivot-ka caadiga ah - waxay ku siin karaan xog dheeri ah oo sax ah .
Feejignaan: Qodobbada Pivot laguma talin in loo isticmaalo calaamadaha kaliya ee lagu furayo ganacsi. Waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin liiska tilmaamayaasha meheradda laba-geesoodka ah, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho jaantusyo dheeri ah, sida TradingView ee barnaamijka vfxAlert. Meelaha loo yaqaan 'Demark', waxaa jiri kara isbeddel horay loogu sii wado oo keliya ma aha xilliyada la cayimay laakiin sidoo kale saacado, sidoo kale qoraaga Dow Jones Rudolf Axel.
Sida tilmaamayaasha farsamo kasta oo adag, calaamadaha ugu xoogan ayaa ka muuqda aagga khadka dhexe (dhexe):
haddii uu suuqu furmo meel sare, ka dib inta lagu jiro maalinta Wicitaanka-xulashada ayaa mudnaan dheeraad ah yeelan doonta;
ka hooseeya heerka dhexe, oo raadinaya fursado PUT-option;
goorta, ka dib marka la furo aagga kore, sicirka si dhakhso leh ayuu ugu soo laabtaa khadka dhexe iyadoo burburka hoos u dhacayo - waxaa jira suurta galnimo sare oo dhinaca dhinac ah (fidsan), waxaad u baahan tahay inaad beddesho si aad ugu kala baxdo istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Dhibcaha Pivot waxay u shaqeeyaan sida ku xusan farsamada caadiga ah ee jabitaanka iyo dib u celinta jiidaha qiimaha iyadoo dhowr jeer oo hordhac ah oo aan guuleysan lagu guuleystay!
Dhacdooyinka ugu muhiimsan waxay ku dhacaan inta udhaxeysa S1 - PP - R1. Haddii dhaqdhaqaaqa mawduucyada (xitaa sax) uusan muujin isbeddello fiiqan, sicirka ayaa ku wareegi doona heerarka waqti dheer oo ku filan oo leh burburka xiga ee jihada isbeddelka cusub;
Tijaabinta ama jabinta taageerada S2 waxay muujineysaa dhaq dhaqaaq deg deg ah oo ku wajahan S3 ama dib ugu noqosho tartiib tartiib ah S1 oo leh dhowr sixitaan iyo dib u soo celin heerar dhexdhexaad ah (haddii ay ku jiraan shaxda). Halka ay jirto isbeddel, waxaan eegnaa mugga ganacsiga iyo xaqiijinta ka socota barnaamijka calaamadaha binary.
Inta lagu jiro xilliyada isbeddellada xooggan, R3 iyo S3 waxay muujinayaan bartilmaameedyo ganacsi oo aad u daran (xad dhaaf ah, xakameyn ah) - marka la gaaro, dib u soo kabashada waxay u badan tahay sii socoshada isbeddelka. Xusuusnow - heerarku waa aagagga xilligan xaadirka ah ee xiisaha kordhay, halkan ayaa ah meesha aad u baahan tahay inaad ka furto ikhtiyaarro haddii maamulka lacagta u oggolaado .
Ku isticmaal calaamadaha ganacsiga ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah
Istaraatijiyadaha maalinta dhexdeeda, Qodobbada Pivot waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii dhibco furan / dhicitaan, xaqiijin dheeri ah oo ku saabsan jebinta xuduudaha tilmaamayaasha kanaalka, Meelaha laga gudbayo Celceliska Dhaqdhaqaaqa, iyo xaqiijinta xad dhaafka / xad dhaafka ah.
Markaad fiiriso qaababka farsamada iyo laambadda ee hareeraha Pivot, waxay uga muhiimsan yihiin go'aaminta in boos la furo iyo in kale. Waxaa jira sharaxaad macquul ah oo tan ah - tilmaamuhu wuxuu xisaabiyaa heerar ku saleysan qiimaha maalinti hore, tanina waa mid si weyn udhaxeysa istiraatiijiyado muddo-gaaban ah. Haddii aad kaliya eegto heerarka, waad ka boodi kartaa xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee calaamadaha forex!
Isbeddellada badankood waxay ku dhammaadaan khadadka R3-S3 tallaabaduna waa inay ahaataa mid xoog leh oo ku jabaysa dhexdooda. Caadi ahaan, dib-u-celinta waxay ka bilaabataa R2-S2, marka suuqa horeyba gebi ahaanba loo iibsaday / loo iibiyay, waxaa lagugula talinayaa in la xiro heshiiska hadda socda haddii dallaalku u oggolaado. Waxaan sidoo kale eegeynaa booska heerarka 2-3 maalmood ee la soo dhaafay.
Flat A dheer aaga R1 - PP - S1 waxay muujinaysaa hubin suuqa, waxaa lagu talinayaa in ay sugaan illaa iibsada iyo kuwii alaab ogaado dheelitirka awoodda. Waxaan isticmaalnaa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo sare u kaca marka masaafada u dhexeysa heerarka ay ugu yaraan tahay 20-30 dhibcood.
Haddii xadka udhaxeeya khadadka cidhiidhiga, tani waxay muujineysaa isbeddel gaabis ah, iyo haddii calaamadaha ganacsiga nool ay xaqiijinayaan isbeddelka, waad furi kartaa heshiisyo dheeri ah ama cusub!
Faa'iidada ugu weyn ee Qodobbada Pivot waa sahlanaanta xisaabinta iyada oo aan wax laga beddelin oo dib loo casriyeeyo maalinta gudaheeda. Laakiin xusuusnow: in ka badan saddex-dib-u-tijaabooyin ayaa yaraynaya saxnaanshihiisa maalinta xigta, gaar ahaan waqtiyada ka yar H1;
Heerarka waxaa had iyo jeer tixgeliya kuwa sameeya suuqa markay qorsheynayaan isbeddellada dhexdhexaadka ah iyo muddada-dheer. Way u muuqdaan ganacsatada oo dhan, taas oo macnaheedu yahay inay fududahay in la hogaamiyo "dadka badan" ee gadaashaada, si ula kac ah u jebinaya heerka ama u sameynayo mala-awaal, dejinaya tiro badan oo muddo-gaaban ah oo ka soo horjeedda amarrada la sugayo. Marka ganacsiyada yaryar badankood ay kudhamaadaan khasaaro, dhaqso ugulaabo dhaq dhaqaaqii asalka ahaa;
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa kalandarka dhaqaale ee ku jira dhammaan bixiyeyaasha calaamadaha binary ee ugu wanaagsan!
Si looga fogaado in lagu dhaco dabinka, ganacsatada xirfadleyda ah waxay adeegsan karaan tilmaame dib u xisaabiya heerarka ka dib marka la xiro kulan kasta oo Forex ah. Waxaa jira fikrad ah in qaabkan aad si dheeri ah u xaqiijin karto runta burburka / ka noqoshada heerarka udub dhexaadka.
Sida had iyo jeer, waxaa lagugula talinayaa inaad falanqeyso dhowr wakhti oo isku mid ah: iskudhafka M-M15-M30 iyo H1-H4 ayaa si fiican u shaqeynaya. Haddii ay jiraan heerar dhowr ah isla aagga, tani waxay kordhinaysaa calaamadaha.
Soo koob . Waa inaad had iyo jeer xasuusnaataa in tilmaamayaal kasta iyo istiraatiijiyaddu aysan siinaynin 100% dammaanad faa'iido ah. Markaad falanqeyneyso sida ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeynayo, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso arrimo badan oo suuq ah, gaar ahaan asalka aasaasiga ah, oo saameyn xoog leh ku leh xisaabinta heerarka Qodobbada Pivot!